Erotic - pejy fandokoana ho an'ny ankizy maimaim-poana
Fiaraha-miasa sy erotisme
Fantatrao koa ve izany? Rehefa afaka taona vitsivitsy dia "mihazakazaka" ny fifandraisana satria matetika ny fiainana andavanandro no mahazo anao ary kely fotsiny ny fotoana anananao amin'ny fiarahana.
Tena mandalo vavony ve ny fitiavana?
Anisan'ireo fomba maro hitazonana ny fifandraisana «vaovao», vao tsy ela aho no nahita fifandraisana manokana.
Sakafo sy erotika - © Nomad_Soul / Adobe Stock
Eny, tsy teny an-tanako loatra, fa kosa nitsambikina tamin'ny efijery. Nahita boky iray aho izay ahitanao ny fomba fahandro izay namboarina tamin'ny fangaro azonao ampiasaina effet aphrodisiac hoy i.
Midika izany, mazava ho azy, misy boky mahandro tsy tambo isaina ary mazava ho azy fa hahita lovia iray na iray hafa ianao na aiza na aiza izay voalaza fa zavatra manokana ho an'ny hariva mahafinaritra ho an'ny roa.
Fa ity boky "Heiße Küche" nosoratan'i Valery Sanders ity dia tena henjana, satria any dia tsy hahita afa-tsy lovia mety hanomboka takariva "mahafinaritra" ianao. "Fiaraha-miasa sy erotisme" Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 9. Oktobra 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy Fiaraha-miasa & izahoKeywords sakafo afrodisyak, eroticism, manaitaitra, Essen, Liebe, Ny lalan'ny fon'ny lehilahy dia mamakivaky ny vavony, fiaraha-miasa, mamitakaLeave a Comment amin'ny fiaraha-miasa sy ny erotisma